Madaxweyne Farmaajo “Waxaan leenahay Hal Cadow oo ah Al-Shabaab” – XOGMAAL.COM
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadweyne badan kula hadlayay maanta xarunta Degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho, ayaa sheega Cadowga kaliya ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed inuu yahay Argagixisada Al-Shabaab oo doonaysa in maalin kasta ay daadiyaan Dhiiga Shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sheegay ciidammada amniga inay u taaganyihiin saacad kasta badbaadinta iyo sidii ay kaga difaaci lahaayeen maleeshiyaadka Arxanka daran ee Argagixisada Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in dowladdu aysan aqbalayn in Cadowgu uu ku soo dhex dhuunto shacabka Soomaaliyeed si ay u abuuraan xasilooni daro.
Dhanka kale Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay labo dhalinyaro oo maanta ciidammada amniga ay ku dileen degmada Howlwadeeg, isagoo ehelada labada Marxuum alle uga baryaya inuu janadii fardowso ka waraabiyo.
“Ninkii ciidan ah oo sharciga aanan ilaalin, oo aanan ilaalin xuquuqda Shacabka, Sharciga ayuu hortagi wixii uu shaqaystay ayuuna leeyahay, meel kasta uu tagana waan soo qabanaynaa.” ayuu yiri Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Ugu danbayntii Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in ciidammadu aysan sinayn laakiin ay jiraan ciidammo badan oo u taagan difaaca sharafta shacabka iyo dalka, loona baahanyahay in la gacan siiyo.
Saraakiil iyo Askar loo xiray is rasaaseyn labadii maalmood ee u dambeeyay ka dhacay Muqdisho